Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Anyị na-edepụta ihe a 5 Kasị mara mma ọhịa na Europe dị nnọọ na oge maka festive Oge ezumike! Ihe kachasị mkpa maka ezumike maka ọtụtụ ndị hụrụ njem n'anya bụ osimiri. Mana Europe nwere ụzọ karịa ikpere mmiri. Join us as we take a stomp…
Oge Ọgụgụ: 8 nkeji Ma ị na-na ịga na Amsterdam nke mbụ ma ọ bụ na-alọghachi inyocha ọmarịcha ọwa mmiri ọzọ, ị ga-achọ ịma banyere ihe ndị kasị pụrụ iche na-eme na Amsterdam! Ọ bụrụ na ị dị njikere ịchọ ihe egwu gabigara ụzọ Damrak na Amsterdam, ndepụta a…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Mgbe ejegharị ejegharị ná mba ọzọ, anyị niile hụrụ ohere ịga ahịa maka onwe anyị, ezinụlọ na ndị enyi! Ọ na-adị iche iche ná mba ọzọ, ọ bụ na ọ? Mgbe ọ na-abịa Europe, shopping anaghị tụkwasịrị. Not only does it have famous shopping cities such as London…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji E nwere ọtụtụ ụdịdị nke iga mma karịa ụgbọ okporo, ma a osimiri ụgbọ-abịa mara mma nso! Ọ bụ a dara oké ọnụ ma leisurely ụzọ achọpụta utọ nke Europe, ịhụ obodo, mpaghara, na mba si a ọhụrụ n'ọnọdụ. Nwere ike ịchọpụta ebe dị egwu…